Farmaajo oo noqday madaxweynaha Soomaaliya - BBC Somali
Image caption Madaxweyne Farmaajo ayaa balan qaaday in uu musuqmaasuqa la dagaalami doono
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u soo noqday Ra'iisalwasaare ayaa ku guulaystay madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha xilku ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tanaasulay in uu wareegga saddexaad la tartamo.
Madaxwayne Xasan oo khudbad u jeediyay xildhibaanada ayaa ku baaqay in la lala shaqeeyo madaxwaynaha cusub.
Xasan wuxuu sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay wadadii dimuqraadiyadda uuna u hambalyaynayo madaxwaynaha cusub.
Image caption Farmaajo ayaa aad loogu xasuustaa in uu dadaal badan geliyay daryeelka ciidammada qalabka sida markii uu ra'iisalwasaaraha ahaa
Madaxweyne Farmaajo ayaa isla goobtaasi lagu dhaariyay.
Khudbad uu u jeediyay xildhibaanada ayuu ugu mahadceliyay Xasan Sheekh Maxamuud sida wanaagsan ee uu xilka u wareejiyay, waxaa kale oo uu ammaanay Shariif Xasan.
Doorashada ayaa dhacday iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay.
Siday Doorashadu u dhacday
Xildhibaanno 328 ah oo ka kooban Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa ka qaybqaatay codaynta doorashada.
Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in hal xildhibaan oo xanuusan oo kali ah uu ka maqnaa.
Wareegga koobaad ee doorashada waxaa ka qayb qaatay 21 murashax.
Image caption Madaxweynaha waxaa doortay xubnaha baarlamaanka ee Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka
Yaa u gudbay wareegga labaad?
Wareegga labaad waxaa isugu haray
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke - 37 cod helay ayaase iskii uga haray wareegga labaad.
Weriyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa sheegay "in doorashada wareegga labaad ay ka xamaasad badnayd middii koobaad".
Farmaajo ayaa si layaab leh codad badan u helay wareeggii labaad.
Image caption Saddexdii murashax ee isugu soo haray wareegga labaad
Codadkii la kala helay wareegga labaad
Maxamed Cabdullaahi Maxamed "Farmaajo" - 184
Xasan Sheekh Maxamuud - 97
Shariif Sheekh Axmed - 46
Arrintaas ayaa xaqiijisay in Farmaajo iyo Xasan ay u gudbaan wareeg saddexaad.
Laakiin Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aansaday in ninkii roonaaday wareegga labaad uu reerka u haro.
Damaashaadka doorashada Farmaajo
Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku farxay oo u damaashaaday madaxweyne Farmaajo, meelaha la xaqiijiyay in looga damaashaaday waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Shacabka oo kali ah ma ahayn ee xildhibaanada Soomaaliya ee doortay ayaa iyaga sacab iyo sawaxan isku daray markii ay caddaatay in uu masiirka umadda la wareegay.